Xildhibaanada Jubilee oo doonayo Wabukala in u noqdo madaxa Gudiga IEBC – The Voice of Northeastern Kenya
Xildhibaanada Jubilee oo doonayo Wabukala in u noqdo madaxa Gudiga IEBC
starfmke August 8, 2016
5 xildhibaan oo ka tirsan isbahaysiga talada dalka haya ee Jubilee ayaa waxa ay sheegen in ay doonayan in badariga weyn ee hadda hawlgab noqday in u qabto hoggaanka gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC.
Xildhibaanadan oo u hoggaaminayay xildhibaanka laga soo doortay degaan barlamaneedka Koofur Gatundu Moses Kuria ayaa waxa ay sheegen in haddi la doonayo in Kenyanka ay kalsooni ku qaban natiijada ka soo baxda doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo biisha August ee sanadka inagu soo aadan waa in xilka ah madaxa guddiga doorashooyinka loo dhibo hoggaamiye diineyd.
Xubnaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC ee gudoomiyaha u yahay Ahmed Issack Hassan ayaa waxa ay isbuuci aanu ka soo gudubney ogolaaden in ay xafiiska baneeyan si loo soo xusho gudi kale ka hor doorashada lagu wado in ay dalka ka qabsoonto sanada 2017-ka.
Sidoo kale waxa lagu wada in qalinka lagu dhufto sarkaaalka madaxa fulinta ee IEBC Ezra Chiloba,kuxigeenkiisa Betty Sungura Nyabuto agaasimaha diiwangelinta Immaculate Kassait.
Gudiga IEBC ee lagu wado in ay xafiiska baneeyan ayaa waxa lagu eedeeyay arrimo ay kamid yihiin Musuq maasuq,in ay xafiiska u isticmaalen si qaldan iyo in ay si wanaagsan u maareyn doorashooyinka dalka ka dhacay sanada 2013-ka.
Dhanka kale wasiirka waraabka Eugene Wamalwa ayaa waxa u isna xukumadda ka codsaday in ay gudiga si Sharaf ay ku dheehantahay ay u sagootiyan.
Madaxweyne ku xigeenka dalka Wiliam Samoei ruto ayaa waxa u isna sheegay in ay xukumadda Jubilee tageero u fidin doonto gudiga cusub ee lo soo xulan doono in ay u istaagan isla markaasina ay qabtan doorashada 2017-ka.
← Manchester United oo ku guuleysatay koobka Community Shieldka
Hoggaamiyaasha Jubilee oo ku kala aragti duwanaaday ayidaada Wamalwa in uu u tartamo kursiga gavanatoor ee Countiga Nairobi →